Onye meriri emeri bu ... - ndi mmadu - GHARA EGO
Ma onye mmeri bụ… - ndị mmadụ
By TELES RELAY On Dee 19, 2019
"Little" blues star Charlie Baty nke Nightcats agabigala ...
Rachel Legrain-Trapani: afọ iri na otu gara aga, ọ kọọrọ ya ...
Princess Eugenie bipụtara Fergie ụtụ na-emetụ n'ahụ - y…
(ahaziri) https://www.youtube.com/watch?v=1EszZi2yT54 (/ ahaziri)
Mgbe ọnwa atọ nke ejiji ejiji ọhịa, iwepụ esemokwu, mgbe ụfọdụ nnukwu arụmọrụ, na agụụ na-adịghị mma maka nlọghachi Adam Levine, oge 17 nke "Olu" a kpọrọ ya kechie n'abalị Tuesday.
Mgbe ngwụcha awa abụọ fụrụ akpụ zaa na NBC, onye na-abụ abụ nanị na ọkụ ahụ bụ ...
Ekele m niile @IGIHE! Gị na ndị ọzọ ndị ọzọ mechara bụrụ ihe ịtụnanya n’oge a. Enweghị m ike ịhụ ihe ọdịnihu gị niile🎵🎉# Olu#OtuIhachukwu https://t.co/GwwtxkQAle
- Jacob Emery (TheJacobEmery) 18 décembre 2019
Hoot, onye na-agụ egwú obodo nke Kelly Clarkson duziri, meriri Ricky Duran (Team Blake Shelton) maka aha ahụ. Katie Kadan (Team John Legend) rụchara nke atọ na Rose Short (Team Gwen Stefani) rụchara nke anọ.
Nke a bụ mmeri nke ndị nkụzi nke atọ nye Clarkson, onye mbụ meriri oge 14 na onye na-asọmpi Brynn Cartelli, wee merie Oge 15 na onye asọmpi Chevel Shepherd.
Mmeri Hoot, Cookeville dị afọ 31, onye bi na Tennessee, abịabeghị oke anya. Ọ rụpụta ọdịiche nke onye na-ese ihe mgbasa ozi na usoro mgbasa ozi (na Apple Music) ma na-ewepụta oge dị egwu ma dị mkpa. Clarkson, ọ bụ ezie na ọ bụ onye na-akwado ya, kpọrọ ya "aka ala, onye na-abụ abụ kacha mma n'ikpeazụ".
Mana Hoot kwesiri imeri echiche mbu tupu o guzosie ike dika onye okacha amara. N'ime nyocha ndị ahụ kpuru ìsì, ọ kpọrọ naanị otu onye nchịkwa - Clarkson - ka ọ gbanwee oche ya. N'ime izu ole na ole mbụ, ọ nwetara aha ọma maka ịnwe ọnọdụ ihu "ihere".
Otú ọ dị, Hoot dị jụụ ma na-ekwusi ike ka oge ahụ na-aga n'ihu, na mmetụta uche ya banyere Eagles '"Desperado" rutere na nke mbụ na saịtị Apple Music. Ndị otu ya na-akwado ya - nke a maara dị ka "Hooters" - abụrụla ndị a ma ama.
Mmeri ya na-aga n'ihu na ọganiihu dị ịtụnanya nke ndị ọbụ abụ obodo - na ndị asọmpi sitere na Ndịda - na "Olu".
A mụrụ Hoot na Texas, ma nne na nna ya ndị ozi ala ọzọ kpọgara ezinụlọ ahụ na Dominican Republic mgbe ọ dị afọ 9. Mgbe ọ bi ebe ahụ, ọ malitere ịbụ abụ ma kpọọ ụbọ mgbe ọ na-asụ Spanish ọfụma. Mgbe ọ dị afọ 20, ọ kwagara Tennessee ebe ọ malitere ịme egwu mgbe ọ na-aga Mahadum Tennessee Tech dị ka onye na-egwu bọl.
Oge ikpeazụ nke elekere abụọ nke Wednesday bụ, dị ka ọ dị na mbụ, jupụtara na arụmọrụ sitere na ndị ama ama. Onye bụbu onye nchịkwa Jennifer Hudson laghachiri na olu "Voice" ahụ na Black Eyed Peas, Luke Combs, Lady Antebellum, Little Big Town, Dua Lipa na onye mmeri nke 16 Maelyn.
Nke a bu ụzọ pụta (na Bekee) mercurynews.com
est-eto etondị mmadụ
Kedụ ka MHD si ebi na ụlọ mkpọrọ? - Ndepụta
Barça-Real: ntaramahụhụ abụọ echefuru, mkpesa ndị ọchịchị dara - FOOT 01
"Little" blues star Charlie Baty nke Nightcats agabigala - ndị mmadụ
Rachel Legrain-Trapani: afọ iri na otu gara aga, ọ tụkwasịrị obi n'oge gara aga dịka ...
Princess Eugenie na-emetụ ụtụ na Fergie - gụnyere aha otutu ...
Amazon Go Grocery: ụlọ ahịa na-ere ahịa na-enweghị ego nke nwere onyinye bara ụba karị | Akwụkwọ akụkọ…